ခဈြဇနီးလေးကို ပိုငျဆိုငျခှငျရပွီး အိမျထောငျတဈခုကိုတညျထောငျပွီးနောကျပိုငျးမှာ အရငျလိုမဆိုးတော့ကွောငျး ပွောပွလာတဲ့ နိုငျးဝမျး – Sport Gaber
ပရိသတ်ကြီးရေ အဆိုတော် နိုင်းဝမ်းကိုတော့ အထူးအထွေ မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုအောင် ချစ်ခင်ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်.။ နိုင်းဝမ်းကတော့ အမိုက်စား Rap စာသားများနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုတွေကို ရရှိထားသူ Rapper အဆိုတော် တစ်ယောက် ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်. ။
နင်သာရှိရင် သီချင်းနဲ့ စတင်ကာ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုတွေကို အပြည့်အဝ ရရှိခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှုတွေကို ရရှိခဲ့သူ နိုင်းဝမ်းကတော့ သီချင်း ထွက်ကျဲပြီး မုဒ် အပြည့်နဲ့ သီချင်းအမိုက်စားတွေကိုသာ ချပြတတ်သူပါ.။ အချစ်ရေးမှာ လည်း ချစ်သူသက်တမ်း ကြာကြာ တွဲပြီး ချစ်ခဲ့ရသူလေးနဲ့ပဲ ဘဝခရီးလျှောက်ဖို့ ရွှေလက်တွဲ လက် ထပ်ခဲ့ပြီး ပျော်ရွှင်သာယာတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို တည်ဆောက်နေသူပါ.။
ပူပူနွေးနွေး ကြင်စဦးလေးမို့ နိုင်းဝမ်းက ချစ်ဇနီးလေးကို ပိုင်ဆိ်ုင်ခွင့်ရလို့ ကံကောင်းကာ ပျော်ရွှင်ရကြောင်းလေးတွေကို ရေးတင်လေ့ရှိပြီး ဇန်နဝါရီလ (၂၁)ရက်နေ့မှာလည်း နိုင်းဝမ်းက “မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထပ်ကတည်းက အမှန်တရားတစ်ခုကိုပြောပြမယ်..”လူဆိုးလူမိုက်တွေ လိမ္မာပြီဟေ့ဆိုရင်၊ လူလိမ္မာတွေ လိုက်မမှီဘူး”#သိဘို့” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်.။
နိုင်းဝမ်းကတော့ အရင်ကဆိုးခဲ့သမျှ သူ့အတွက်တော့ ချစ်ဇနီးနဲ့ ရွှေလက်တွဲပြီးနောက် လိမ္မာပြီး ပျော်ရွှင်နေရကြောင်းလေးကို သွယ်ဝိုက်ပြီး တင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်..ပရိသတ်ကြီး.။ ဖတ်ရှု့ပေးခဲ့ကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးလည်း ပျော်ရွှင်သာယာတဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိ်ုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်.။
Source: Nine One’s Facebook
ပရိသတျကွီးရေ အဆိုတျော နိုငျးဝမျးကိုတော့ အထူးအထှေ မိတျဆကျပေးစရာမလိုအောငျ ခဈြခငျရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျ ထငျပါတယျ.။ နိုငျးဝမျးကတော့ အမိုကျစား Rap စာသားမြားနဲ့ ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုတှကေို ရရှိထားသူ Rapper အဆိုတျော တဈယောကျ ပဲဖွဈပါတယျနျော. ။
နငျသာရှိရငျ သီခငျြးနဲ့ စတငျကာ ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုတှကေို အပွညျ့အဝ ရရှိခဲ့ပွီး အောငျမွငျမှုတှကေို ရရှိခဲ့သူ နိုငျးဝမျးကတော့ သီခငျြး ထှကျကြဲပွီး မုဒျ အပွညျ့နဲ့ သီခငျြးအမိုကျစားတှကေိုသာ ခပြွတတျသူပါ.။ အခဈြရေးမှာ လညျး ခဈြသူသကျတမျး ကွာကွာ တှဲပွီး ခဈြခဲ့ရသူလေးနဲ့ပဲ ဘဝခရီးလြှောကျဖို့ ရှလေကျတှဲ လကျ ထပျခဲ့ပွီး ပြျောရှငျသာယာတဲ့ အိမျထောငျရေးကို တညျဆောကျနသေူပါ.။
ပူပူနှေးနှေး ကွငျစဦးလေးမို့ နိုငျးဝမျးက ခဈြဇနီးလေးကို ပိုငျဆျိုငျခှငျ့ရလို့ ကံကောငျးကာ ပြျောရှငျရကွောငျးလေးတှကေို ရေးတငျလရှေိ့ပွီး ဇနျနဝါရီလ (၂၁)ရကျနမှေ့ာလညျး နိုငျးဝမျးက “မွတျစှာဘုရားရှငျလကျထပျကတညျးက အမှနျတရားတဈခုကိုပွောပွမယျ..”လူဆိုးလူမိုကျတှေ လိမ်မာပွီဟဆေို့ရငျ၊ လူလိမ်မာတှေ လိုကျမမှီဘူး”#သိဘို့” ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျလာခဲ့ပါတယျ.။
နိုငျးဝမျးကတော့ အရငျကဆိုးခဲ့သမြှ သူ့အတှကျတော့ ခဈြဇနီးနဲ့ ရှလေကျတှဲပွီးနောကျ လိမ်မာပွီး ပြျောရှငျနရေကွောငျးလေးကို သှယျဝိုကျပွီး တငျလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျနျော..ပရိသတျကွီး.။ ဖတျရှု့ပေးခဲ့ကွတဲ့ ပရိသတျကွီးလညျး ပြျောရှငျသာယာတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆျိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ.။